Lomano – «Open water swim» : handray anjara ny Malagasy | NewsMada
Lomano – «Open water swim» : handray anjara ny Malagasy
Hotanterahina, ny 2 sy ny 3 desambra ho avy izao, ao amin’ny dobo filomanosan’ny Mont-Choisy, atsy Maorisy, ny andiany voalohany amin’ny “Open water swim”, ho an’ny sokajy “junior”. Fihaonana, karakarain’ny kaonfederasiona afrikanina, ho an’ny mpilomano tsy matihanina (Cana), ho an’ny faritra fahefatra, izay hampiantranoan’ny Maorisianina.
Fantatra fa anisan’ireo handray anjara amin’izany i Madagasikara. Araka ny vaovao, navoakan’ny gazety Le Mauricien fa teratany malagasy efatra mianadahy, mipetraka any Maorisy, no hisolo tena an’i Madagasikara, amin’io fifaninanana io. Izy ireo izay efa nitoetra any fotoana ela, fony mbola tsy nisy ny aretina pesta mamely an’i Madagasikara, amin’izao fotoana izao.
Manana fanahiana i Maorisy, ankehitriny, noho ny fahavitsian’ny mpandray anjara satria tsy misy afa-tsy firenena efatra, hatreto, ireo namaly ny fanasana : dia ry zareo Afrika Atsimo, i Angola ary i Madagasikara, miampy ny mpampiantrano. Mbola nangataka fe-potoana kely kosa ny Zambianina vao hamaly na hifaninana na tsia. Marihina fa 14 ny isan’ireo firenena mpikambana ao amin’ny faritra fahefatra.
Hanana mpilomano be indrindra, amin’ity fifaninana ity, i Maorisy izay hisy mpifaninana valo, arahin’ny Malagasy, miisa efatra. Iray avy kosa ny an’i Angola sy i Afrika Atsimo.